Ny fandaharam-potoana tsara indrindra hijerena ny hetsika ara-batana | Androidsis
Eny an-tsena dia afaka mahita fantsom-pandrefesana marobe sy fehin-tànana miisa isa izay ahafahantsika mahafantatra amin'ny fotoana rehetra hoe ohatrinona ny fanazaran-tena efa nataontsika, ny karazana fampihetseham-batana nataontsika ary ny kaloria nodoranay. Ny fehin-tànana manome tanana dia manome fahombiazana tsara ho antsika amin'ny vidiny mirakitra bebe kokoa noho ny hitantsika eo amin'ny tontolon'ny akanjo azo anaovana akanjo, fa raha vao zatra mampiasa fitaovana iray karazana ianao dia toa tsy tianao hampiasaina isan'andro izany.
Raha toa ianao ka efa nanao ny iray ntazatra nandritra ny fotoana kelikely nefa te handroso lavitra kokoa ary ho lasa mpampiasa smartwatch izay manao asa fanaraha-maso mitovy amin'izany, ankoatry ny famelana anay hiantso, hamaly hafatra, hitantana ny fandaharam-potoanay, hankafizo ilay hafahafa izay lalaoviko avy eo amin'ny tanantsika ... eto amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao hoe iza izy ireo ny smartwatches tsara indrindra hanaraha-maso ny asantsika ara-batana.
Nandritra ny taona 2017, nahita rindrambaiko marobe niaraka tamin'ny Android Wear tonga teny amin'ny tsena isika, ny ankamaroan'izy ireo dia nifantoka tamin'ny lamaody, fa ny LG Watch Sport dia iray amin'ireo vitsy afa-maina. Ny ivelany amin'ity maodely ity dia manolotra kitapo misy rano matevina miaraka amina fehy vita amin'ny plastika izay manome antsika endrika be fanatanjahan-tena. Ilay satro-boninahitra mihodina, tena mitovy amin'ilay natolotry ny Samsung Gear Sport, dia ahafahantsika mivezivezy haingana amin'ny menus sy rindranasa nefa tsy mila mikitika na mivezivezy manerana ny efijery.
Raha mpankafy Android ianao, azo inoana fa ity no terminal ilainao noho ny fampidirana tanteraka amin'ny Android, indrindra raha ny momba ny rindranasa, ny fampandrenesana ary ny fampifanarahana data. Raha ny fanarahana ny hetsika ataontsika, dia latsaka kely ny Android Wear raha oharina amin'ny Samsung Gear Sport sy Fitbit Ionic. Ny LG Watch Sport dia eo afovoany eo anelanelan'ny famantaranandro marani-tsaina sy ireo mifantoka amin'ny fampihetseham-batana, ary ny rindrambaiko no teboka malemy indrindra.
Ny maodely farany indrindra izay natombok'i Fitbit dia ny famenon-javatra mety indrindra ho an'ireo tia fanatanjahan-tena, satria ny maodely Ionic no smartwatch tonga lafatra ho an'ny olona tena tia mifantoha amin'ny fanaraha-maso ny hetsika ankoatra ny fahafahany mampiasa azy io ho toy ny smartwatch nentim-paharazana. Na dia lehibe kokoa noho ny nantenaintsika aza ny fisehoany, ny Fitbit Ionic dia manana efijery izay toa tsara indrindra amin'ny masoandro, manana puce GPS, sensor amin'ny tahan'ny fo optika, metatra oxygen oxygen, mahatohitra ny halalin'ny 50 metatra. Ankoatr'izay, manana chip NFC koa izy, toerana fitahirizana 2,5 GB ary bateria maharitra 4 andro, zavatra izay tsy ho hitantsika amin'ny maodely fifaninanana hafa.
Nandritra ny taona maro, mpampiasa maro no niantehitra tamin'i Fitbit hanisa ny hetsika ara-panatanjahantena, dia ny Ionic ny maodely feno indrindra sy maoderina indrindra izay mety ho hitantsika amin'ity orinasa ity eny an-tsena eo ambanin'ny 300 euro fotsiny. Ny olana atolotry ny Fitbit Ionic antsika dia ny tsy fampidirana azy ao amin'ny rafitra fiasa toy ny fitaovana tantanan'ny Android Wear, na koa ny Samsung's Gear. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy tadidintsika fa io no maodely feno indrindra eny an-tsena mba hamaritana ny hetsika ara-batana rehetra ataontsika.
Ny smartwatch tsara indrindra hampiasana fampandrenesana isan'andro ankoatra ny firaketana ny hetsika ara-batana rehetra ataontsika dia omen'ny Gear Sport avy amin'ny Samsung. Ity modely ity dia namboarina mba hanolotra a Fanoherana 5 ATM ary manana ny sensor rehetra ilaina hahazoana antoka fa tafiditra avokoa ny asantsika. Ny rindranasa izay anoratanay an-tsoratra ny asanay rehetra, Samsung Salud, dia nahagaga fa tsara afaka manaraka ny fiofanana tsirairay amin'ny fotoana fohy sy maharitra ary afaka manadihady rehefa mandeha ny fotoana. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo toa ny Under Armor sy MapMayFitness.
Ny Gear Sport dia misarika ny saina manokana satria tsy manome endrika ho fanatanjahan-tena ho antsika araka ny antenainao amin'ny anarany izany. Azo atao mora foana isan'andro izany nefa tsy misongadina indrindra eo amin'ny tanantsika, izay tsy azo lazaina ho an'ny ankamaroan'ny fitaovana marani-tsaina mikendry ny hamaroana ny hetsika ara-panatanjahantena. Tahaka ireo maodely teo aloha, ny bezel mihodina dia fitaovana mahafinaritra hifaneraserana amin'ilay fitaovana raha manao karazana fanatanjahan-tena isika. Miankina amin'ny fampiasana ataontsika mba hamaritana ny hetsika fanatanjahantena, ny bateria dia afaka maharitra eo anelanelan'ny 2 sy 3 andro.
Mividiana Samsung Gear Sport
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny smartwatches tsara indrindra hanaraha-maso ny asantsika ara-batana